Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru » Mmadụ 32 nwụrụ, mmadụ 20 merụrụ ahụ ka ụgbọ ala dara n'elu ugwu na Peru
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A na -ahụkarị ihe mberede okporo ụzọ na Peru n'ihi ndị ọkwọ ụgbọala na -agba ọsọ ọsọ, okporo ụzọ anaghị arụ ọrụ nke ọma, enweghị akara okporo ụzọ na nchekwa nchekwa okporo ụzọ adịghị mma.
Ọtụtụ mmadụ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala Lima.
Highspeed nyere aka na mbibi ụgbọ ala.
Ụmụaka abụọ so na ndị nwụrụ n'ihe mberede.
Dị ka ndị ọrụ Peruvian si kwuo, ụgbọ ala ndị njem bu mmadụ iri isii na isii esiwo n'elu ugwu daa n'akụkụ isi obodo Lima.
Dịkarịa ala, mmadụ iri atọ na abụọ nwụrụ ebe ihe karịrị mmadụ 20 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ. Ụmụaka abụọ-nwata nwoke dị afọ isii na nwata nwanyị dị afọ atọ-so na ndị njem nwụrụ.
Ihe mberede a bụ nke Peru nke atọ ọtụtụ ihe mberede ụgbọ ihe mberede mere n'ime ụbọchị anọ.
Ihe mberede a mere na warara warawara nke okporo ụzọ Central Carretera ihe dị ka kilomita 60 (kilomita iri atọ) n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke isi obodo Lima. Roadzọ ahụ na -ejikọ Lima na ọtụtụ etiti Andes.
Ndị ọrụ gọọmentị na -ekwu na "akpachapụghị anya" nyere aka na mberede, ebe ụgbọ ala ahụ na -aga "na oke ọsọ".
Dị ka akụkọ ndị lanarịrịnụ si kwuo, ọ kụrụ oké nkume wee mikpuo n'ime abyss nke dị mita 650 n'obosara.
Na Sọnde gara aga, mmadụ iri abụọ na abụọ nwụrụ mgbe ụgbọ mmiri abụọ jikọtara n'osimiri Amazon na Peru. Nọmba a na -amabeghị ama ka na -efu.
Ụbọchị abụọ tupu mgbe ahụ, ụgbọ ala ọzọ dabara na ndagwurugwu na ndịda ọwụwa anyanwụ mba ahụ, wee gbuo mmadụ 17.